Ndụmọdụ na-eri obere batrị na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Aghụghọ iji chekwaa batrị na gam akporo
Ugbu a na ọtụtụ mmadụ nwere ngwaọrụ mkpanaka gam akporo, mkpa ọ dị ime na ike batrị na-adịte aka karịa obere oge bụ otu n’ime ebumnuche bụ isi a gbalịrị ịchọta ya site na ndị ọrụ ya. Anyị nwere ozi ọma na nke ọjọọ na nke a, ebe ọ bụ na n'isiokwu a anyị ga-ekwupụta aghụghọ ole na ole iji gbalịa ime ka ụgwọ batrị anyị dị ntakịrị.
Ihe mbụ anyị ga-eme ka o doo anya bụ na ọ nweghị ụdị ngwa ọ bụla nwere ike ịgbatị ma ọ bụ gbasaa oge ojiji batrị na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo; gịnị ma ọ bụrụ na ha dị adị bụ ngwaọrụ ụfọdụ nwere ike inyere anyị aka ijikwa ike enyere site na batrị nke akụrụngwa a. N'isiokwu a anyị ga-ekwupụta, nke bụ ngwa gam akporo nke nwere ike iri batrị gị kachasị, ihe enyochala ma nyocha ya site n'ọtụtụ ndị ọkachamara jiri mita ụfọdụ maka ebumnuche a.
1 Ngwa jikwaa ike batrị na gam akporo
2 Ngwa gam akporo nke na-eri ike batrị karịa
3 Aka Atụmatụ iji chebe ndụ batrị na android
Ngwa jikwaa ike batrị na gam akporo
Na mbụ anyị ga-amasị banyere na mgbe ọzọ milliamps batrị anyị nwere ike ịnapụta gị nkọwa, na usoro iwu anyị nwere ike ịnwekwu oge kwụụrụ onwe anyị na ngwaọrụ gam akporo anyị. Mgbe ịmechara obere nkọwa a, dịka ngwa ọrụ mbụ maka ebumnuche a, anyị nwere ike ikwu Mfe Battery nchekwa, nke biara inye onye ọrụ otutu profaịlụ ịhọrọ site na; onye ọ bụla n’ime ha ga-arụ ọrụ ụfọdụ na ebumnobi ya n’ọkụ batrị anaghị eri ngwa ngwa. Naanị inye obere ihe atụ nke ụfọdụ profaịlụ ya, anyị nwere ike ịsị na n'otu oge ahụ batrị na-agwụ ike, ngwa ọrụ ga-ewepu njikọta na GPS ruo mgbe ụgwọ ahụ ga-ala karịa.
Anyị nwekwara Njikọ nkọ, nke kama echeghị ụgwọ batrị iji ruo opekempe, kama ọ na-agba mbọ ịhụ oke oriri na-enweghị isi na ya. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na na a ụfọdụ oge ihuenyo anyị gam akporo ngwaọrụ na-gbanyụọ ruo ogologo oge, Wi-Fi Njikọta ga-akpaghị aka na-agbanyụọkwa iji zere kpomkwem a oriri.
Mgbe ihuenyo ahụ na-agbanye ọzọ, njikọta ga-arụ ọrụ. N'ime nhazi ahụ, onye ọrụ nwere ike ịhazi akụkụ a, na-enwe ike ịkọwa na oge awa ọ bụla ngwaọrụ deactivates Wi-Fi maka oge ụfọdụ.
Dọkịta batrị Ọ bụ ihe ọzọ magburu onwe ngwá ọrụ na-enwe ike jikwaa batrị ụgwọ na ihe gam akporo ngwaọrụ; ọ na-etinye ọnọdụ nke ibu na mpaghara ngosi, na-atụ aro na oge ụfọdụ, nke bụ ọrụ ndị a ga-enwe nkwarụ ka ọkụ wee ghara iri ngwa ngwa.
Ngwa gam akporo nke na-eri ike batrị karịa
Ọ bụ ihe ọ bụla na nzuzo na e nwere ọtụtụ ngwa gam akporo nke nwere ike iri ike batrị gị n'ụzọ dị egwu; na-enweghị ịkọ ụfọdụ n'ime ha n'ozuzu ha, anyị nwere ike ikwu obere okwu ahụ ngwa ọ bụla nke na-eme ka ngwaọrụ ahụ rụọ ọrụ, ị na-akwado n'ụzọ doro anya iji batrị gị.
Dabere na nke a, egwuregwu vidiyo yana netwọkụ mmekọrịta bụ ndị nwere ike iri oke ụgwọ batrị ahụ, ebe ọ bụ na ndị ọrụ ha na-ejikọkarị ihe niile na gburugburu ebe ndị a. Na mgbakwunye, ihe nkiri vidio ndị kachasị ọkaibe ma sie ike chọrọ ọtụtụ akụ iji rụọ ọrụ; Ọ bụrụ na anyị na-akparịta ụka ma ọ bụ na-emekọrịta ihe oyiyi na netwọkụ mmekọrịta, nke a na-anọchi anya nnukwu mbọ maka ngwaọrụ yana yabụ, maka ụgwọ ma ọ bụ ike batrị na ngwaọrụ gam akporo anyị.
Aka Atụmatụ iji chebe ndụ batrị na android
Ihie na gbanyụọ ihuenyo. Ọ dị mkpa na ị nwere ike tinye nhazi nke sistemụ arụmọrụ gam akporo gị iji jikwaa akụkụ 2 ndị a nke ọma. Ìhè ahụ nwere ike belata n'ọkwa ebe a na-agụ ihe niile; ihuenyo kwụsịrị bụ 30 sekọnd, ihe ị ga - ejigide ma ọ bụ bawanye dabere na mkpa ọrụ gị na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị mee ka oke a, ị ka nwere bọtịnụ iji aka gbanyụọ ihuenyo kọmputa.
Gbanyụọ ọrụ na gam akporo. Mgbe ị na-agaghị sọfụ Internetntanetị, ọ na-atụ aro ka ị gbanyụọ Wi-Fi Njikọta; I nwekwara ike nyochaa mpaghara ebe a na-atụ aro ya amanye mmechi nke ndị ị na-ejighị. Nke a apụtaghị na a ga-ewepụ ha kama ọ bụ na ha agaghị arụ ọrụ ma yabụ na ha agaghị enyekwu ọrụ na ngwaọrụ gam akporo gị na ibu ya.
Gbanyụọ ngwaọrụ gam akporo. Ọ bụrụ na ị na-agagharị na ụzọ ụgbọ oloko, a na-atụ aro ka ị gbanyụọ ihuenyo nke ngwaọrụ mkpanaka gị; Ikwesiri ime otu ọnọdụ ahụ n'abalị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị kpebiri izu ike. Enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-ahapụkarị ngebichi iji lebara ozi ọ bụla ma ọ bụ ozi ọhụụ nke na-abata n'etiti abalị, ihe anyị nwere ike ileghara anya ebe izu ike kwesịrị ịdị nsọ.
Jụọ ngwaọrụ gam akporo anyị. N'akụkụ a enwere ọtụtụ mkparịta ụka, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-ejikọtaghị na ha ejirila nkwụnye ọkụ jikọọ na njedebe. Nke a ezighi ezi, ebe ụgwọ batrị na-ebelata. Ya mere, naanị mgbe anyị hụrụ na ihe nkwụnye ụgwọ ahụ dị obere, ọ ga-abụ oge kwesịrị ekwesị mgbe anyị ga-ejikọ ya na ntanetị eletrik anyị ka ụgwọ batrị ahụ wee malite.
Anyị enyela ndụmọdụ ole na ole n'isiokwu a, nke ga-aba uru maka gị mgbe ọ bịara mee ka batrị na-achịkwa nke ọma Ọzọkwa, na anyị na-eji ihe onwunwe ndị dị mkpa naanị mgbe anyị na ngwaọrụ gam akporo na-arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Aghụghọ iji chekwaa batrị na gam akporo